खोप लगाएकालाई किन देखिन्छ कोरोना ?Main Samachar
१८ बैशाख २०७८, शनिबार १३:५७ प्रकाशित
वैशाख १० गते दुबै डोज लगाएका ग्राण्डी अस्पतालका एक चिकित्सकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण उनले पहिलो चरणमै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएका थिए।
संक्रमण पुष्टि हुनुअघि उनले वैशाख ८ गते मात्र दोस्रो डोज खोप लगाएका थिए।
वैशाख १५ गते भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका धौलागिरी अस्पतालमा कार्यरत दुई जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भयो।
भाइरसविरुद्धको दुबै खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई केही लक्षण देखिएपछि पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो।
परीक्षण गर्दा उनीहरु दुबै जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
अहिले खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि अझै बढि सर्तकता अपनाउन विज्ञहरुले सबैलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
दुबै डोज खोप लगाएका व्यक्तिहरु संक्रमित हुनुले खोप लगाइसके पछि पनि संक्रमणको जोखिम यथावतै रहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको महामारी विशेषज्ञ डा. ल्हामो वाई शेर्पाले बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘खोप प्रभावकारी हो। तर सत प्रतिशत प्रभावकारी भन्ने हुँदैन। यो लगाइसकेपछि आफू सुरक्षित भइन्छ। अरुलाई पनि प्रोटेक्ट गरिन्छ।’
खोप लगाएर ढुक्क हुने अवस्था भने नभएको उनी बताउँछिन्, ‘खोप लगाएपनि भाइरस हाम्रो शरीरको कुनै भागमा हुन सक्छ। जसले गर्दा अरु व्यक्ति संक्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले खोप लगाएपनि मास्क लगाउने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने, दूरी कायम गर्ने गर्नुस् भन्नु कारण नै त्यहीँ भएर हो। यो भनिरहनुको मतलब खोप प्रभावकारी नभएका कारण होइन।’
डा. बाबुरा मरासिनीका अनुसार खोप लगाएपनि कसैलाई संक्रमण भएको छ भने खोपको पहिलो डोज र दास्रो डोजको बिचमा एकदमै लामो ग्याप भएर पनि हुन सक्छ। अथवा खोप लगाउनु भन्दा पहिला नै संक्रमित भएर पनि हुन सक्छ।
‘संक्रमण अन्य धेरै कारणले हुन सक्छ। तर यो धेरै कम संख्यामा देखिएको छ। खोप लगाए पनि संक्रमण देखियो भने खोपले काम नगरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘यो नयाँ रोग हो। यसमाथि विभिन्न अनुसन्धानहरु भइरहेका छन्। खोप पनि त्यहीँ हो। पहिला लहरको लागि बनेको खोपले अहिलेको भेरियन्टको लागि प्रभावकारीता कम देखिन सक्छ।’
तर खोप लगाइसकेपछि संक्रमित भएपछि गम्भीर हुने सम्भावना भने एकदमै कम हुने उनी बताउँछन्।
‘खोप लगाइसकेपछि संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना कम हुन्छ। अर्थात् संक्रमिण भएपनि गम्भीर भइदैन। र आइसीयू, भेन्टिलेटरमा पुग्नु पर्ने अवस्था आउँदैन।’
खोप लगाएपछि संक्रमण जोखिम कम हुने हो। यसले कोरोनाविरुद्ध लड्न ६० देखि ७० प्रतिशत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने हो।
त्यसैले खोप लगाएको भन्दैमा भनेर लापरवाही गरेर ढुक्क हुने अवस्था नभएको डा. शेर्पा बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘सावधानी अपनाउन सकिएन भने अवस्था भयावह हुन सक्छ। खोपले यूकेको भेरियन्टका लागि काम गर्छ, भन्ने छ। तर ब्राजेलीयन भेरियन्टको लागि ब्राजिलमै खोपहरुले काम नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो भेरियन्ट अलि डरलाग्दो पनि छ। त्यसैले आफ्नो सुरुक्षाका लागि आफै सचेत हुन जरुरी छ।’
हाल देशभर ३८ हजार ८ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने ३ हजार २ सय भन्दा बढिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उसो त पछिल्लो केही साता यता दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्या उकालो चढिरहेको छ।
शुक्रबार मात्रै ५ हजार ७ सय भन्दा बढि नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। यही स्थितिमा संक्रमित थपिँदै जाने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्था आउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले नै विरामीले अस्पताल भरिएका छन्। अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटर नपाएर विरामी पालो कुर्नु पर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ।